Kronofogden: Caruurta qoysaska ee gurayaha laga saaro oo hoos u dhacday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kronofogden: Caruurta qoysaska ee gurayaha laga saaro oo hoos u dhacday
La daabacay fredag 22 december 2017 kl 11.54
Wakaladda wararka Ekot ayaa booqatay suuq krismis oo lagu iibinayay cunto diyaarsan oo qofkii doona ka iibsan karayo saxan cunto fiican saarantahay hase yeeshee dadka meesha joogay oo dhan jeebkeeda ma wada wanaagsaneen oo dadka qaar ayaa cuntada ku cunayay si bilaash ah.
Sheeda sare marka laga eego, ma kala garan kartid qofka wax heysta iyo midka aan heysan, ayay tiri Marika Hjelm Siegwald oo ka tiran hay’adda gargaarka dadka fuqurada ah ee Stockholms stadsmission.
– Dad hoy la’aan ah ayaa inagu dhex jira. Maanta qofka xaalkiisu sidaasi yahay isi gaar ah uma muuqdo. Waxan arkeynaa in hoos u dhaca dadka hoy la’aanta noqda xagga da’da oo xitaa waxay taabaneysaa qoysaska caruurta. cid walba oo inaga mid ah ayaa maanta noqon kara hoy la’aa, ayay tiri Marika.
Marika Hjelm Siegwald ayaa sheegtay in hadiyada ugu xun ee uu heli karo ubad, ay tahay in guriga uu ku noolaa laga saaro oo uu ku dhaco xaalad hoy la’aan ah, iyada oo sheegtay in wax badan aysan u baahneen in hoy la’aan uu ubad noqdo, dabcan waalidka ubadka oo kala taga ayaa ku filan ayay leedahay Marika.
– Furiinka wax badan ayuu sababaa. Labada waalid mid ayaa dhibaato kala soo dersi kartaa xagga hoyga, waa uu xanuunsan karaa, shaqo la’aan ama niyad jab ayaa ku dhici kara ka dib waxaa fududaaneysa in si sahlan qofka uu ku galo liiska madow ee deynta deetana guriga laga saaro, ayay leedahay Marika.
Dhammaan inta ka hawlgasha suuqa guryaha waxay la tahay in ay haboon tahay in laga taxadaro in guryaha la iska saaro sidaasi daraadeed waxaa hoos u dhacday tirada caruurta ee qoysaskooda laga saaro guriga ay ku noolaayen.
Sanadkii 2010, caruur gaareysa 600 ayaa laga saaray xaafadaha ay deganaayeen hase yeshee sanadka waxaa jira hoos u dhac oo tirada waa 400 caruur.
Hase yeeshee Lars Bodin, oo ah xiriiryaha qeybta ka hortaga ee hay’adda Kronofogden ayaa oranayaa in hay’addu fuliso 33 boqlkiiba kiisaska soo gaara ee guri iska saarista. Dhammaan kiisaska guri ka saarista dad bixin waayay kirada guriga ayaa yimaada hay’adda.
Kiisaska dadka qaar waxay caawinaad ka helaan hay’adda adega bulshada ee socialtjänsten ama waxaa loo sammeeyaa qorshe qeyb qeyb ay isaga bixin karaan deynta kirada lagu yeeshay.
Martin Lindvall, oo ah madaxa siyaasadda bulshada ee shirkadaha guryaha, ayaa oranaya in shirkadaha guryaha kireeya inta badan isku dayaan in ay caawiyaan dadka, isaga oo sheegaya in ay tahay wax sahlan in kirada laga isaga bixiyo habka autogiro ee shirkada si otomaatig ah kontadaada kaga saarato kirada si meesha looga saaro ilow ama dayacaad kale oo la soo darso kireystaha.
Hase yeeshee Marika Hjelm Siegwald ee ururka gargaarka ee Stockholms stadsmission ayaa sii aminsan in in shirkadaha guryaha kireeya ay aad ugu deg degaan in dadka ka saaraan guriga.
Balse Martin Lindvall ayay sidaai la aheyn isaga oo oranaya, ma dareemayo in la bixin karo sawir guud oo ah in shirkaduhu ku deg degaan guri ka saarista. Guriga ka saarista xitaa waxay dhib ku tahay shirkadaha guryaha kireeya marka hamuunka ay u qabaan in ay sidaasi sammeeyaan waa mid aad u yar, ayuu leeyahay Martin Landvall.